LEGO ဘယ်ဇာတ်ကောင်တွေသုံးသင့်လဲ Star Wars UCS Republic Gunship မှာပါဝင်ပါသလား။
02 / 02 / 2021 02 / 02 / 2021 ခရစ် Wharfe 1586 Views စာ0မှတ်ချက် 75021 သမ္မတနိုင်ငံ Gunship, တပ်မှူး Cody, Ideas, Jedi Bob, Lego, Lego Ideas, Lego Star Wars, Nebulon-B ဖရီးဂိတ်စစ်သင်္ဘော, သမ္မတနိုင်ငံ Gunship, Star Wars, လည်စည်းဗုံးခွဲ, UCS သမ္မတနိုင်ငံ Gunship, Ultimate စုဆောင်းစီးရီး
အဆိုပါ Lego Star Wars UCS Republic Gunship သည်ယခုနွေရာသီတွင်လမ်းပေါ်တွင်ရှိသည် Brick Fanatics တပ်မှူး Cody ကနေ Bultar Swan အထိပါ ၀ င်နိုင်တဲ့အသေးစားဓာတ်ပုံအသေးစားစာရင်းပါရှိပါတယ်။
ဖေဖော်ဝါရီလ 2020 ခုနှစ်, Lego Ideas အသုံးပြုသူတစ် ဦး ၏လမ်းဖြင့်စီရင်ဆုံးဖြတ် အွန်လိုင်းစစ်တမ်း သမ္မတနိုင်ငံ Gunship အနာဂတ်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ Lego Star Wars Ultimate Collector စီးရီးအစုံသည် TIE Bomber နှင့် Nebulon-B ဖရီးဂိတ်စစ်သင်္ဘော။ (အိုကေကောင်းကောင်းမနေနိုင်ဘူး။ )
ထိုအရာအားအကောင်အထည်ပေါ်လာရန်ကျွန်ုပ်တို့စောင့်ဆိုင်းနေဆဲဖြစ်သော်လည်းကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်ရှည်မှုသည်မကြာမီထွက်ပေါ်လာတော့မည်ဟူသောကောလာဟလများထွက်ပေါ်နေသည်။ ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကျော်အတွင်းပထမဆုံးတည်ဆောက်ခဲ့သော UCS သည်ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကျော်ကြာမြင့်ခဲ့သောသုံးလကြာမြင့်သည်။ ဒီနှစ်နှောင်းပိုင်း။ နောက်ဆုံးလအနည်းငယ်အတွင်းတရားဝင်ထုတ်ပြန်ကြေငြာခြင်းသို့ကျွန်ုပ်တို့ရေတွက်နေစဉ်၊ မည်သည့်အရာကဖြတ်တောက်မည်ဆိုပါက UCS Republic Gunship တွင်မည်သည့်အသေးစားပုံစံများပါဝင်သင့်သည်ကိုစဉ်းစားနေသည်။
ပြီးတော့သူတို့တွေဟာအမှန်တကယ်ပါ ၀ င်မှုဖြစ်နိုင်ခြေကိုဆုံးဖြတ်ပြီး၊ များသောအားဖြင့်များသောအားဖြင့်တောင်းဆိုမှုနောက်ကိုလိုက်သောလုံးဝကျပန်းဇာတ်ကောင်ရွေးချယ်မှုအပေါ်အခြေခံပါတယ် Lego Star Wars အစုံ။
Republic of Gunship ကိုကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးအကြိမ်တွေ့ခဲ့တာကိုပြန်စဉ်းစားပါ Star Warsဖြေ။ ။ Clone of Attones သည် Geonosian Arena သို့ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ပျက်စီးသွားသောသူရဲကောင်းများကိုကယ်တင်နိုင်ခဲ့သည်။ ထိုအချိန်ကသင်္ဘောပေါ်၌အဓိကအကျဆုံးဇာတ်ကောင်သုံး ဦး မှာမည်သူတို့နည်း။ Anakin Skywalker၊ Obi-Wan Kenobi နှင့် Padme Amidala ။
အဆိုပါ Lego ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် 2013 Republic Gunship ဖြင့်ဇာတ်ကောင်သုံး ဦး စလုံးပါ ၀ င်ခဲ့သည်။ အုပ်စုသည် (Obi-Wan သည်ရုပ်ရှင်ထဲတွင်ပါဝင်သည်။ ) UCS ဗားရှင်းတွင်အမည်မပါ ၀ င်သောစာလုံးများပါ ၀ င်ပါက Gunship မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်သူတို့မြင်တွေ့ရမည့်အက္ခရာများသည်အလွန်အဓိပ္ပာယ်ရှိသည်။ ဒီတော့ခင်ဗျားကဒီသုံးခုကိုရေတွက်နိုင်တယ်။
Clone Gunship တစ်ခုသည်၎င်းကိုဖြည့်ရန် Clone Troopers လိုအပ်သည်။ လာမယ့် UCS set ဟာ minifigure-scale ဖြစ်မယ်ဆိုရင်၊ ဒါကလက်ရှိဗားရှင်းတွေဟာဈေးကြီးပြီးအဆုံးသတ်သွားပြီဖြစ်လို့သံသယဖြစ်ဖွယ်ဖြစ်ပုံရတယ်။ Lego Group ၏အစုစု (နှင့်မည်သည့် UCS အစုံထို့ကြောင့်ပင်ပိုကြီးသွားဖို့လိုအပ်လိမ့်မယ်) ။ ဒါပေမယ့်တိုင်းမကြာသေးမီ UCS Star Wars အနည်းဆုံးအနိမ့်ဆုံးအနေဖြင့်သင်္ဘောတွင်ပြသမှုကိုအခြေပြုမည့်လေယာဉ်မှူးတစ် ဦး နှင့်သက်ဆိုင်သည့်နက္ခတ္တဗေဒဆိုင်ရာ Droid နှင့်အတူပါ ၀ င်သည်။
ထိုယုတ္တိဗေဒအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အနည်းဆုံး Clone လေယာဉ်မှူးတစ် ဦး - ဖြစ်နိုင်သည်၊ ပို၍ တိကျမှန်ကန်သောသံခမောက်ပုံသဏ္withာန်နှင့် - အနည်းဆုံးပုံမှန် Clone Trooper တစ်ခုမြင်နိုင်သည်။ အကယ်၍ အသေးစားပုံစံ ၂ ခုသည် UCS Republic Gunship ခင်းကျင်းပြသခြင်းတွင်ထိုင်ရန်အဓိပ္ပာယ်ရှိပါကယင်းသည်ထိုအရာများဖြစ်သည် - သို့သော် kabpit ထိုင်ခုံများနှင့်ရွက်လွှင့်မှုများအတွက်လေယာဉ်မှူးများ၏ပြည့်စုံသောဖြည့်စွက်မှုကိုကျွန်ုပ်တို့လုံးဝမပြောနိုင်ပါ။ ဟုတ်ပါတယ် Lego Group ကဟုတ်တယ်လို့မပြောဘူး။
ဘဝ၌အရာသုံးခုသာသေချာသည် - သေခြင်း၊ Lego Star Wars အသစ်သော Commander Cody minifigure အကြောင်းအိပ်မက်မက်နေသောပရိသတ်များ - နောက်တဖန်အကြိမ်ကြိမ်စိတ်ပျက်ရမည့်အချိန်။ ၎င်းသည်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကလွှင့်တင်ခဲ့သောအခိုင်အမာဟာသဖြစ်သည် 75286 အထွေထွေ GrievousStarfighter: Commander Cody အတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီဖြစ်သော Commander Cody အပါအ ၀ င်မရေမတွက်နိုင်အောင်များပြားလှသောရောင်းအားများကိုရောင်းချနိုင်ပြီး… Commander Cody လည်းမပါ ၀ င်ပါ။
UCS Republic Gunship တွင်ထပ်မံသုတ်ခြင်းနှင့်ထပ်ခါထပ်ခါလုပ်ခြင်းသည်မဖြစ်နိုင်ပုံရသော်လည်းပရိသတ်များကမူယခင်စစ်တမ်းမှရေးထည့်ရန်နေရာတွင်တောင်းဆိုခဲ့ကြသည် (MandRproductions အောက်ရှိမှတ်ချက်များကိုသာကြည့်ပါ) Lego Star Wars သက်သေအထောက်အထားအတွက်ဗီဒီယို)၊ မင်းဘယ်တော့မှမသိဘူး Lego အဖွဲ့မှတဆင့်လာနိုင်သည်။ (အိုကေ၊ ငါတို့ရင်ဆိုင်ကြရအောင်၊ ငါတို့သိလား။ )
တစ် ဦး ကဒဏ္endာရီဇာတ်ကောင် Lego Star Wars Jedi Bob သည်လူ့အဖွဲ့အစည်းကခံယူထားသည်ထက်ခံယူသည် Lego Group ကိုယ်တိုင်သည် ၂၀၀၂ ခုနှစ်တွင် Republic of Gunship တွင် ၇၁၆၃ ပေါ်ပေါက်လာခဲ့သည်။ နဂါးငွေ့တန်းများစစ်ဖြစ်နေသောမြေပြင်မှ ၀ င်ရောက်လာသောယောက်ျားအတွက်အလွန်ပျော်ရွှင်သည်။
သို့တိုင်ကျွန်ုပ်တို့သည် Bob ဟောင်းကိုချစ်သော်လည်းမချစ်နိုင်ပါ၊ ထို့ကြောင့်သူသည်သင်္ဘောတစ်စင်းတည်းတွင်ပထမဆုံးအကြိမ်ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပြီး ၁၉ နှစ်ခန့်အကြာတွင်သူသည် UCS Republic Gunship အတွက်သူ့အားနောက်ဆုံးသတင်းကိုတွေ့မြင်လိုသည်။ ၎င်းသည်မူလ Clone of the Attones အစုံနှင့်ကြီးပြင်းလာပြီး Gunship ကိုပရိသတ်များမဲပေးခြင်းအတွက်ပထမ ဦး ဆုံးအနေနှင့်အဓိကအားဖြင့်အဓိကအားဖြင့်တာ ၀ န်ထမ်းဆောင်နေသော prequel trilogy ကလေးများအတွက်တောက်ပသောခေါင်းတလားဖြစ်လိမ့်မည်။ Lego Group ကလုပ်ဖို့မအရူးပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့်ဖြစ်ပျက်မည်မဟုတ်အတိအကျဒါကြောင့်ပါပဲ။
Geonosis တွင် Jedi များစွာရှိခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် Wookieepedia ၏အမှောင်ထုအကျဆုံးနေရာများတွင်သင်သာရှာတွေ့နိုင်သည့်နာမည်တစ်ခုဖြင့်ကျပန်းမြင်သာထင်သာမြင်သာသော Jedi အားပေးဖို့အခွင့်အရေးကိုယူပါလေ။ The Lego Coleman Trebor အကြောင်းကို 75019 AT-TE မတိုင်မီ ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင်စတင်ခဲ့ဖူးပါသလား။ - နှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူပရိသတ်ကိုအဓိကပစ်မှတ်ထားတဲ့ set ကိုမကျင့် အမှန် ယေဘုယျသော့ချက်စာလုံးများကိုစိတ်ပူရန်လိုအပ်သည်။
Sora Bulq ကောဘယ်လိုလဲ။ Roth-Del Masona? Bultar Swan? (ကျနော်တို့ကတိပေး ဒီနာမည်တွေပဲလုပ်တာမဟုတ်ဘူး။ ) ဒါမှမဟုတ်၊ Lego Group ကငါတို့ကိုနောက်ထပ် Mace Windu ပေးရုံပဲ။
← LEGO အသိအမှတ်ပြုပစ္စည်းအရောင်းဆိုင်သည် Amelia Earh ၄၀၄၅၀ ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်art အခွန်ဆက်လက်ဆောင် - နှင့်အတူ - ဝယ်ယူ
LEGO တရုတ်ရိုးရာပွဲတော် ၈၀၁၀၇ နွေ ဦး မီးအိမ်ပွဲတော်သည်ပြန်လည်ကုန်ပစ္စည်းဖြစ်သည် →